Xog iyo Gorfeyn:- Xiisadda siyaasadeed ee Galmudug iyo hogaaminta madaxweyne C/kariin Guuleed – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xog iyo Gorfeyn:- Xiisadda siyaasadeed ee Galmudug iyo hogaaminta madaxweyne C/kariin Guuleed
Wararka naga soo gaaraya magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in xiisadda siyaasadeed ee maamulka Galmudug ay haatan cirka isku shareertay, kadib markii qaar ka mid ah xildhibaanada maamulkaasi ay shaaciyeen inay xilkii ka qaadeen madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed.
Illaa 54 xildhibaan oo ka mid ah baarlamanka maamulka Galmudug, uuna hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka baarlamanka Xareed Cali Xareed ayaa dhawaan shaaciyay inay kalsoonidii kala laabteen madaxweynaha maamulkaasi C/kariin Xuseen Guuleed.
Xildhibaanadaasi ayaa haatan u muuqda mid weli ku adkeysanaya inay kacdoonkooda weli wadaan, islamarkaana ay dhawaan dooran doonaan madaxweyne cusub ee hogaamin doonna maamulka Galmudug.
Go’aanka xildhibaanada Galmudug ayaa haatan u muuqda mid aanay haatan suurto-gal noqon karin, marka la eego doorashada uu dalku jiro iyo xaaladda abaareed ee ka taagan deegaanada Galmudug.
Hadaba waxaa isweydiin mudan, yaa ka dambeeyay kacdoonkaan deg-dega ah ee xilka looga qaaday madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed, yaase taageersan xil ka qaadistiisa, yaase kasoo horjeeda.
Warbaahinta Bulshoweyn oo arrinkaasi ku sameeysay dabagal aad u dheer ayaa ugu dambeyn kusoo ogaatay dadka markii hore ka dambeeyay kacdoonka ay haatan wadaan xildhibaanada baarlamaanka Galmudug.
Warar hoose oo ay warbaahinta Bulshoweyn heleeyso ayaa sheegaya in siyaasiyiin ku kacsan madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ay iska kaashadeen kicinta xiisadda ka taagan maamulka Galmudug, taas oo daminteeda aysan haatan sahlaneyn islamarkaana marba marka kasii dambeyso ay sii adkaaneyso.
Kacdoonkaan siyaasadeed ayaa cirka isku sii shareeray kadib markii uu madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed isbaheysi siyaasadeed la sameeyay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan, inkastoo markii dambe uu isaga baxay isbaheysigaas.
Siyaasiyiinta sida gaar ah u wadda kicinta xiisadda maamulka Galmudug ayaa la sheegayaa inuu ka mid yahay ganacsade Axmed Ducaale Geele oo ku magac dheer Axmed Xaaf, kaas oo dhawaan caddeeystay inuu ku faraxsan yahay waxa haatan ka socda magaalada Cadaado.
Madaxweyne C/kariin Guuleed ayaa sida muuqata ku fashilmay hogaaminta maamulka Galmudug, kadib markii uu xitaa awoodi kari waayay inuu isku haayo hogaanka baarlamaanka Galmudug.
Arrintaasi ayaa muujineysa in xitaa hadii uu ka bad-baado kacdoonka ay haatan wadaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug, inuu yahay shaqsi aan la jaan-qaadi karin xaaladda dalka ka jirta.
Taageerayaasha madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa la sheegayaa inay ka mid yihiin madaxdii madasha qaran oo dhawaan ka hadlay xiisadaha ka taagan maamulka Galmudug, marka laga reebo guddoomiyaha baarlamaanka Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Guuleed ayaa la sheegayaa inuu haatan taageero weyn ka heysto inta badan xubnaha Galmudug ee labada gole baarlamanka Soomaaliya, ciidamada nabad-sugidda maamulkaasi iyo madax ka tirsan maamulkaasi marka laga reebo qeyb yar oo ka mid ah wasiirada Galmudug.